Chikamu chemari inowanikwa kubva kuApple Pride Edition tambo ichaenda kumasangano eLGBT | Ndinobva mac
Chikamu chemari inowanikwa kubva kuApple Pride Edition tambo ichaenda kumasangano eLGBT
Inosvitsa gore rimwe kubva kuvhurwa kwetambo yakapihwa vashandi veApple yezuva rePride uye ndokuzotengeswa chete mune zvimwe zvitoro zvefemu. Nhasi uno tambo inotamba mutambo wemu murarabungu yatove kuwanikwa zvizere muzvitoro zvese uye ikozvino Apple inozivisa izvozvo chikamu chemubatsiro unowanikwa kubva mukutengeswa kwemabhanhire aya Ichaenda kumapoka eLGBT nemasangano. Nenzira iyi, vashandisi vanotenga iyo Pride Edition yakarukwa tambo yenylon vachapa chikamu chemari yavo kumasangano anoumba mapoka aya.
Iye CEO weApple pachake akabuda makore mashoma apfuura achiudza nyika kuti aive ngochani, chimwe chinhu chaive rusununguko kwaari mushure mekumanikidzwa kwenhau kwaakange atsungirira kwemakore mazhinji. Chero zvazvingaitika, chinhu chakakosha ndechekuti sezvo ari iye anotungamira Apple akagara achidzivirira kodzero dzevanhu zvisinei nekwavo kwepabonde kana chitendero. Kune aya LGBT mapoka anowana chikamu chemari irwo rubatsiro rwakakosha Uye Apple zvechokwadi haizorasikirwa nemari yakawanda pairi, chero.
Tambo dzakasiyana dzeApple Watch dzatinogona kuwana muApple dzinotaura mabhenefiti anoshamisa kukombe yeCupertino, nekuti izvi zvishongedzo zvinochiviwa nevashandisi vechiratidzo uye vane mukana we chinja tambo zviri nyore paApple Watch inoita kuti kutengesa kuve kwakanaka chaizvo uye kunounza bhenefiti kuchiratidzo. Mune ino kesi ndeye tambo ine mutengo we59 euros uye tinogona kuiwana chete muApple zvitoro kana pawebhusaiti pachayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Chikamu chemari inowanikwa kubva kuApple Pride Edition tambo ichaenda kumasangano eLGBT
Tora PDFelement 6 yeMac pahafu yemutengo